Caayrada Kayseri waxay ku tiirsan tahay wadooyinka tareenka ee Yurub | RayHaber | raillynews
HomeGUUDBojisada Kayseri ayaa ku soo noqonaysa waddooyinka Europe ee Railways
19 / 06 / 2015 GUUD, Headline, TURKEY
Bogie of Kayseri soo celisaa in Tareennada Yurub: Kayseri ganacsade Halis Turgut, bogies soo saaray warshad baabuur gaar ah ugu horeysay Turkiga oo ku salaysan eedaymaha 8 sano ka hor (ugu yaraan dhigo nidaamka wheel on laba ulahooda wareejiya), oo toobad keen on tareenka ee Europe.
Gudoomiyaha Gudiga Wershadaha Railtur Wagon iyo Nidaamka Gawaarida Nidaamka Raadinta Gaadiidka Anatolian Member Turgut, ayaa u sheegay weriye AA, shirkadda waxaa lagu aasaasay xamaasad hiwaayadda 2007, ayuu yidhi.
Turkey ka aasaasay shirkad ugu horeysay ee gaar loo leeyahay ee arimahan waa mid cajiib ah in ay Turgut yiri:
"Waxaan ka iibsannay 38 kun oo dolar baabuur oo ka socda shirkad ku taal Ukraine shirkaddeena shidaalka. Markii 2 loo baahnaa mar labaad dabayaaqadii sanadka, waxay kor u qaadeen qiimaha wagon illaa kun doolar. Waxaan usheegay inaanan ku iibsan karin gaarigaan qiimahan, oo aan annaga qudheena ka dhigno haddii ay tahay inaan iibsano. Maamulaha guud ee shirkada ayaa ku dooday inaanan soo saari karin. Halkaas, waxaan ku khamaarnay shaashadiisa iyo cashadiisii ​​Bosphorus. Sidaas darteed, waxaan ku noqonay Kayseri oo waxaan aasaasnay ​​warshaddii ugu horreysay ee aagga warshadaha abaabulan. Waqtigaas, waxaan ku bilownay shaqaalaha 75-3 oo ku yaal kun mitir oo laba jibbaaran oo ah 25. Waxaan hadda la shaqeyneynaa dadka 30 ee ku nool aagga 9 kun oo mitir murabac oo ku yaal aagga Free Kayseri Free Zone. Waxaan hadda haysannaa ku dhowaad amarrada gawaarida 204. Wax kale oo aan ahayn, waxaan soo saareynaa bogie dibada. Waxaan heysanaa nooca 500 ee bohol iska leh shirkadaheena. Boggii ugu dambeeyay ee noociisa K-noo ah ee aan soo saarnay waxaa soo saarey kaliya 8 Yurub. Annaga oo ah 'Turk ahaan, waan ku faan nahay inaan ka mid nahay kooxaha reer Yurub.'
Turgut wuxuu sheegay inay wali soo saarayaan gaari nooca nooca xNUMX ah isla markaana ay bilaabayaan soo saarida gaari nuuca seddexaad ee sanadka soo socda isla markaana ay kordhin doonaan tirada badeecada ilaa 2 hadii mashruuca cusub ee gaari ee ay shaqeynayaan la dhameystiro.
Turgut waxay kaloo xustay inay soo saareen 8 wagon freagon iyo BNUMX tram bogie.
Biri Mid kamid ah gawaarida dagaalka waa wax shidaal ah kan kalena waa gaari xamuul oo qalalan. Waxaan fursad u leennahay inaan ku qaadno ku dhawaad ​​alaabooyin gaar ah oo loo yaqaan "86" ee xamuul xamuul oo qalalan. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ka qaadno alaabooyinka 86 weelka, marble block, xaashida isku-darka xaashida caadiga ah ee guga lagu xareeyay. Gaadhigaani wuxuu leeyahay muuqaal kale. Miisaankiisa dadka isku da'da ah ee Yurub ama adduunka oo dhan waa qiyaastii 25 tan. Badeecadan aan soo saarnay waxay leedahay culeyska xNUMX ton. Faa'iidada ugu horreysa ee tan waa soosaarida qiime jaban. Marka labaad, 20,3 wuxuu awoodaa inuu dib u soo celiyo lacagtiisa qiyaastii 30-3 jeer nolosheeda sanadlaha ah. ”
Boqolkiiba 100 alaabada dhoofinta alaabada
Isagoo tilmaamay inay u dhoofiyaan wax soo saarkooda dalal badan oo reer Yurub ah, ayuu yiri Turgut, imiz Alaabooyinkeenna ayaa ah dhoofinta ugu horreysa ee fasalka gawaarida oo ah kuwa loo yaqaan '100 house' oo ku socda kursiyadooda curyaanka leh astaan ​​u gaar ah, naqshad u gaar ah iyo wax soo saarkooda. Waxaan leenahay caafimad dhammaan tareennada Yurub. Haddii aan kordhin karno awooddeena, wax dhibaato ah naguma hayno kordhinta ama badinta tirada wax soo saarka. Waxaan iibinaa, iibineynaa badeecadaha Jarmalka, Poland, Switzerland, France, Austria. Wax dhib ah kuma lihin taas. Waxaan hadda dhoofineynaa boqolkiiba xNUMX-15 ee awooddeena. Tani waxay ku saabsan tahay 20-6 milyan oo yuuro, kul wuxuu yidhi.
Isagoo carabka ku adkeeyay inay qorsheynayaan kobcinta warshadda isla markaana ay kordhiyaan awoodda wax soo saarka, Turgut wuxuu tilmaamay in dhibaatooyinka ugu waaweyn ee arrintan la xiriira ay yihiin ilaha aadanaha.
Turgut, annaga oo ogaaney in heerka shaqo la'aanta dalka Turkiga waxaa lagu tilmaamay sida jiidaya 10,6 boqolkiiba, "Xaggee baad yimaadaan, hadii shaqo la'aan, waxay leeyihiin meel madaxa naga on," ayuu yidhi. Isagoo sheegay in loo baahan yahay taageero dowladeed xagga soosaarka maraakiibta guryaha iyo waliba gawaarida guryaha, ayuu yiri Turgut:
“Ugu yaraan baahi ayaa loo qabaa dadku inay dhahaan 'caafimaadka gacantaada' laakiin horumarka sheygu wuxuu qaadaa lacag aad u badan. Iyadoo aan la helin taageerada gobolka, suurogal ma ahan in la sameeyo alaabo cusub. Haddii aadan samaysan badeecad cusub, kama koobi kartid badeecadihii hore ee Yurub oo dib ugama iibin kartid Yurub ama meel kale. Xilligan waxaan heysanaa badeelo aan u maleynayo inay macquul ahayn in la sharaxo. Waxa uu qaadan karaan waa ka baxay mashruuca ee Turkey noqon doonaa kacaan duurka this. Haddii sheygan aanu haysan taageero dawladeed, waxaan horumarin karnaa 10 sannad kasta. Haddii taageero jirto, waxaan fulin karnaa 1,5-2 sanad walba U
Imtixaanka Dareembar ee Kaamirada Marinka Cusub ee Kayseri
Qadka Baabuurta ee ugu Weyn Yurub
Goobaha ugu Dabbaasha ee Yurub
Shirkadda telefishinka Sentepe waxay leedahay saldhigyada tayada ugu fiican Yurub
Cimilooyinka caanka ah ee ku yaala Yurub
Turkey noqon doono tareen-xawaaraha sare hoggaamineed ee Yurub!
Maktabadda Magaalooyinka Laasqoray ee Yurub (Sawir Sawir)
Shambadda Turkiga ee Garoonka Diyaaradaha Yurub ee ugu weyn
Tareenada yurub ayaa tijaabinaya Eskisehir
Qalabka digniinta ee wadnaha Europe! Gaadiidka Gaadiidka Daadgureeyey
Shirkadda Goodyear ayaa abaalmarinta abaalmarinta shaqaaleysiinta Yurub
Goobta Xorta ah ee Kayseri
Railtur Wagon Industry Inc.
waxsoosaarka baabuurta ee gudaha
Shirkadaha tareenada ee Eskişehir iyo Belgian ayaa la kulmay
Waqtiga Ka bixitaanka Tilmaamaha Tareenka TCDD
Eeg Mahmut's Profile Full ayuu yiri:
Waxaan u hambalyeynayaa Railtur..dh tayada tayada leh ee wax soo saarka. In kasta oo Tüdemsaş uu yahay goob wax soo saar oo duug ah, haddana tüdemsa placea meeshan wax bay ku taraysaa. Marka la xirey wadooyinka tareenka, qaybta gaarka loo leeyahay kama iibsaneyso gaariga dibedda.